တျောလှနျရေးကွီးမှာ ပါဝငျဖို့ အခကျအခဲရှိတဲ့သူတှကေို အကွံလေးတဈခုပေးရငျး တောငျးဆိုလိုကျတဲ့ သရုပျဆောငျ ဒေါငျး – Moe Tauk Pan
တျောလှနျရေးကွီးမှာ ပါဝငျဖို့ အခကျအခဲရှိတဲ့သူတှကေို အကွံလေးတဈခုပေးရငျး တောငျးဆိုလိုကျတဲ့ သရုပျဆောငျ ဒေါငျး
တော်လှန်ရေးမှာ အပြည့်အဝ မပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေကို အကြံတစ်ခု ပေး လိုက်တဲ့ မင်းသား ဒေါင်း ပရိသ တ်ကြီးရေ… မင်းသား ဒေါင်း ကတော့ အမှန်တရား ကိုချစ်မြ တ်နိုးသူတစ်ေ ယာက် ဖြစ်ပြီးတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သရုပ် ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသားချောတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အပြင် ယောက်ကျားပီသတဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ရှိတာကြောင့် ပျိုမေတို့ချစ်ခင် အား ပေးရတဲ့ မင်းသား တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ် ဒေါင်း ကတော့
ပရိသတ်ကြီးနဲ့ အတူတူ အမှန် တရားဘက်က အမြဲတမ်းရပ် တည်နေတဲ့ မင်းသားတစ် လက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည် ခဲ့တာကြောင့် လက်ရှိမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) နဲ့တရားစွဲခံထားရပါတယ်
ဒေါင်း ဟာ လက်ရှိမှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေပြီးတော့ တော်လှန်ရေးတာဝန်ကို ကျရာနေရာကနေ ထမ်းဆောင်ေ နတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအေ နတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စနစ်ဆိုးမှာ မစီးမြောကြဖို့
ပြည်သူေ တွကို သတိပေးလိုက်ပါတယ် ဒါအပြင် တော်လှ န်ရေးမှာ မပါဝင်နိုင်တဲ့ သူတွေကိုလဲ အကြံတစ်ခုပေး ထားပါေ သးတယ်။” တော်လှန်ရေးထဲအပြည့်အဝ မပါဝင်နိုင် ရင်တောင် စနစ်ဆိုးမှာမ စီးမြောလိုက်ပါ နဲ့
အဲ့လောက်တော့ဆ န့်ကျင်တ တ်ရမယ်” လို့ ဒေါင်း ဟာ သူ့ရဲ့ လူမူ့ကွန်ယက်ေ ပ်ါမှာ ရေးသားထားတာကို ပြန်လည်မျှဝေတ င်ဆက်ပေးလို က်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသား ဒေါင်း ပြောတဲ့အကြံ ကို
လက်ခံသေ ဘာတူကြရဲ့လား??? ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်စနစ်ဆိုးမှာ မစီးမြော ကဖို့လိုပါတယ်ေ နာ်။ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံးေ အးချမ်းပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းေ တာင်းအ ပ်ပါတယ်။
တျောလှနျရေးမှာ အပွညျ့အဝ မပါဝငျနိုငျတဲ့သူတှကေို အကွံတဈခု ပေး လိုကျတဲ့ မငျးသား ဒေါငျး ပရိသ တျကွီးရေ… မငျးသား ဒေါငျး ကတော့ အမှနျတရား ကိုခဈြမွ တျနိုးသူတဈေ ယာကျ ဖွဈပွီးတော့ ကရြာဇာတျရုပျကို
ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ သရုပျ ဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသားခြောတဈယောကျ ဖွဈတဲ့အပွငျ ယောကျကြားပီသတဲ့ ရုပျရညျသှငျပွငျရှိတာကွောငျ့ ပြိုမတေို့ခဈြခငျ အား ပေးရတဲ့ မငျးသား တဈလကျဖွဈပါတယျ ဒေါငျး ကတော့
ပရိသတျကွီးနဲ့ အတူတူ အမှနျ တရားဘကျက အမွဲတမျးရပျ တညျနတေဲ့ မငျးသားတဈ လကျဖွဈပါတယျ။ သူဟာပွညျသူတှဘေကျက ရပျတညျ ခဲ့တာကွောငျ့ လကျရှိမှာ ပုဒျမ ၅၀၅ (က) နဲ့တရားစှဲခံထားရပါတယျ
ဒေါငျး ဟာ လကျရှိမှာ ထိုငျးနိုငျငံမှာ ရောကျရှိနပွေီးတော့ တျောလှနျရေးတာဝနျကို ကရြာနရောကနေ ထမျးဆောငျေ နတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေေ နတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး စနဈဆိုးမှာ မစီးမွောကွဖို့
ပွညျသူေ တှကို သတိပေးလိုကျပါတယျ ဒါအပွငျ တျောလှ နျရေးမှာ မပါဝငျနိုငျတဲ့ သူတှကေိုလဲ အကွံတဈခုပေး ထားပါေ သးတယျ။” တျောလှနျရေးထဲအပွညျ့အဝ မပါဝငျနိုငျ ရငျတောငျ စနဈဆိုးမှာမ စီးမွောလိုကျပါ နဲ့
အဲ့လောကျတော့ဆ နျ့ကငျြတ တျရမယျ” လို့ ဒေါငျး ဟာ သူ့ရဲ့ လူမူ့ကှနျယကျေ ပျါမှာ ရေးသားထားတာကို ပွနျလညျမြှဝတေ ငျဆကျပေးလို ကျပါတယျနျော။ ပရိသတျကွီးရေ မငျးသား ဒေါငျး ပွောတဲ့အကွံ ကို
လကျခံသေ ဘာတူကွရဲ့လား??? ဘာပဲ ဖွဈဖွဈစနဈဆိုးမှာ မစီးမွော ကဖို့လိုပါတယျေ နျာ။ မွနျမာပွညျကွီး အမွနျဆုံးေ အးခမျြးပါစလေို့ ဆုမှနျကောငျးေ တာငျးအ ပျပါတယျ။
‘ဆေးထိုးတာလား၊ ဆီလီကွန်ထည့်တာလား၊ လက်ရောင်လိုက်နေတာလား’ ဝေဖန်နေသူတွေကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ နန်းဝေဝေမြင့်
ဒီကနေ့ မေလ (၁၆)ရက်နေ့ကတော့ အဆိုတော် ပိုပို ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်